Soosaarayaasha qoyan ee ugu Wanaagsan Warshad | Fepton
Isku xirnaanta qoyan
Nooca: ICU pendant
Isbitaalka ICU Qalabka Saqafka-Dhajisan ee Caafimaadka Buundada Buundada waxaa loogu talagalay maareynta ER, ICU, INICU iyo CCU. Buundada kasta oo ku xiran suunka caafimaad waxay ka kooban tahay dhinac qallalan, dhinaca qoyan, iyo dogob bixinta biriijka. Dhinaca qallalan waxay taageero siisaa hawo-mareenka, kormeeraha, damaca, iyo aaladaha kale ee daaweynta yar yar. Qoyanka qoyaanka ah wuxuu taageero siiyaa bambooyin faleebooyin, bambooyin saliinge ah iyo aalado kale oo caafimaad oo yaryar oo kalkaaliyayaal caafimaad ah.
Tilmaamaha horumarsan ee ICU ee saqafka saqafka sare concept Fikrad naqshad gaar ah oo asal ah oo bini-aadamnimo leh: wuxuu keydiyaa meel, waqti, wuxuu siiyaa dhaqaatiirta daaweyn bini aadamnimo. Waxyaabaha aluminium ee tayo sare leh: waligaa ha beddelin, ka hortagga ifafaalaha "qorsheynta", hubso inaysan saameyn ku yeelan doonin hawlgalka caadiga ah ee shaqaalaha caafimaadka.
Tiknoolajiyad dhammaystiran: hubi in qaladka eber ee shey kasta iyo shaqada miridhku, sunta ka hortagga, wasakhda iyo nadiifinta fudud.
Nadaamka aan wiishka lahayn ee wiishka: naqshad aamusan oo aan gariir lahayn, ayaa qancin karta la qabsiga sare ee looga baahan yahay isbedelka joogtada ah ee booska qalabka.
Wareeguhu wuxuu qaataa labalaab diyaarad koronto ah, mashiinka qashin-qubka mashiinka: hawlgalka dammaanad qaadku waa mid fudud oo fudud, bareeggu ma dareemayo hoos. Awood xoog leh oo wax looga qabto: u oggolow qol ballaaran oo kor loogu qaadayo. Minaaradda waxaa loogu talagalay naqshad qaabeysan oo aan jeexdin jeexjeexin dusha sare: dammaanad nadiifin nadiifin ah iyada oo aan xagal dhiman, dhammaystir iyo dammaanad qaadista waxtarka qulqulka laminar. Dawaarle: 8. Marka loo eego baahiyaha kala duwan ee macaamiisha iyo xaaladda dhabta ah ee isbitaalka, qolka qalliinka iyo bay'adda shaqada ee ICU ee loogu talagalay naqshadeynta bini'aadamnimada, waxay la kulmeysaa baahiyaha shakhsi ahaaneed ee macaamiisha illaa inta ugu badan. Khadadka wax soo saarka hodanka ah waxay la kulmaan heerar kala duwan oo baahi ah.
Gacanta fidinta tubular-ka ee fidsan
Faylka tracheal-ka ee fiilooyinka
2 # saxaro
400 * 510mm) + khaanad
Dambiisha birta ahama
(O2 × 1, Hawo5 × 1, Vac × 1)
Shabakadda isku xidhka shabakadda
Nalalka akhriska iyo iftiinka
Socket Universal Customized
Waxaan awoodnaa inaan siino tayo sare leh ICU Pendant macaamiishayada sharafta leh. Ka hor intaan la dirin, ilaaliyeyaashayada tayada ayaa hubinaya in tani ay tahay mid cillad la'aan ku ah dabeecadda si ay ula kulanto shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Kala duwanaanshaheena la bixiyay ayaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah iyo qalabkii ugu dambeeyay si loo hubiyo tayada miridhku u adkaysto iyo kalsoonida.
Waxaan awoodnaa inaan siino tayo sare ICU Single Arm Pendant macaamiishayada sharafta leh. Ka hor intaan la dirin, ilaaliyeyaashayada tayada ayaa hubinaya in tani ay tahay mid cillad la'aan ku ah dabeecadda si ay ula kulanto shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Kala duwanaanshaheena la bixiyay ayaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad casri ah iyo qalabkii ugu dambeeyay si loo hubiyo tayada miridhku u adkaysto iyo kalsoonida.
Shanghai Fepdon Medical Qalabka Co., Ltd waa shirkad xirfad leh oo masraxa qalabka masraxa, iyo alaabtayada iyo adeeggayagu waxay daboolayaan soo saarista, soosaarka OEM / ODM, rakibidda iyo hagaajinta taxanaha silsiladda, buundada suunka caafimaadka, munaaradda qalliinka, makiinadda ICU, qalabka pedant, Hawlgalka LED iftiin aan hoos lahayn iyo iftiin qalliin aan qallafsanayn, mashruuc gaas caafimaad, alaabooyin taxane nuugid faakiyuum ah.
Hore: Qallalan iyo qoyaan isku laalaab ah
Xiga: Manualelectricelectromagnetic hal suuxdinta suunka
Cutubka laba geesoodka ah ee madaxa sariirta
HM-1100CC HM-1100CE HM-1100EE separ qalalan oo qoyan ...
HM-8000 qalalan iyo kala qoqobnaan qoyan penda